I-Intel Cold War Hack 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
I-INTEL ICall of Duty Black Ops: Hack War Cold
I-BO Cold war ingagcina isondelwe njengesigebenga seqiniso isebenzisa i-INTEL!
Ufuna ukuzwa amandla we-COD Black Ops yethu: I-Cold War Hack ngokwakho? Thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla!
Ungabeki umkhawulo wesikhathi onaso sokusebenzisa ama-cheats ethu! Thenga ukhiye womkhiqizo weviki elingu-1 namuhla!
Le inketho ezosetshenziswa kuphela ngabaduni abazinikele kakhulu. Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 namuhla!
I-BO Cold War ingenye yezikhangiso ezithandwayo kakhulu zeCall of Duty esake sazibona, futhi kwaba nengqondo ukuthuthukisa iHack Cold War Hack yethu ukuze ifane ne-hype. Finyelela ukukopela okuzoshintsha umhlaba wakho!
I-Call of Duty Black Ops: Imininingwane Yempi Yomshoshaphansi INTEL
Abadlali beCall of Duty bazolithokozela kakhulu leli thuluzi, njengoba zonke izici ozidingayo ukulawula abapikisi bakho zizobakhona lapha. Ngokuningi okubonakalayo (okufana ne-Enemy / Friendly ESP, Enemy Distance, ne-Visible Check), uzohlala wazi ukuthi izitha zitholakala kuphi futhi uzokwazi ukuziphatha ngendlela ongathanda ngayo!
I-COD Black Ops: I-Cold War Intel Aimbot ayinangqondo, futhi ingasetshenziswa yinoma ngubani - awudingi ukuba ngumakadebona ongumakadebona wama-hacks ukuqonda inqubo lapha. I-GamePron izobeka ulwazi lwakho lomsebenzisi ngaphambi kwanoma yini enye, yingakho imiphumela ivame ukubonakala kahle!
I-Intel cpu kuphela(Idinga i-Virtualization ku-Bios Inikwe amandla !!!)
Ukufinyelela kuzo zonke izici ezimangalisa kakhulu ezinikezwe kwi-Black Ops Intel Hack yethu! Kusukela ku-Aimbot ethembekile ezansi kuya kuma-wallhacks, leli thuluzi lizokunikeza ukufinyelela kunoma yini enye. Ungazihluphi ngawo wonke lawo ma-HOD Cold War Hacks aswelekile!
Isitha / esp enobungane
I-Aimbot enokwezifiso ze-FOV & Smooth
Hlela ukhiye ngokwezifiso
Lwela bone adjustable
Iphalethi elimibalabala le-esp lamathambo
I-FOV ESP Vuliwe / Valiwe
Mayelana neCold War Intel
I-COD Black Ops: I-Cold War Intel yisixazululo esilula (kodwa esithembekile) sokugenca kubo bonke abalandeli bethu be-Call of Duty laphaya. Ukukopela kungaphakathi, futhi kungasetshenziswa ngenkathi kusakazwa ngenxa yenketho ye- "Streamproof"! Njengoba igama lingasikisela, okuwukuphela kwe-CPU esekelwayo yale nketho kuzoba yi-Intel (futhi kufanele ube ne-Virtualization inikwe amandla ku-BIOS yakho!). Ukudlala umdlalo ngemodi yesikrini esigcwele ngenkathi usebenzisa le hack kuqondile futhi, nokuyinto abanye onjiniyela abavame ukuyikhawulela.
Kungani usebenzise iCold War Intel ngaphezu kwabanye abahlinzeki?
Kungani ungabeki ukholo lwakho kumhlinzeki onokwethenjelwa kakhulu wama-hacks online? I-GamePron iyakuqonda okufunwa ngumsebenzisi kumathuluzi abo, yingakho sikwazi ukuletha ngokungaguquguquki - abanye abahlinzeki bazolwela ukusiza amakhasimende abo enkabeni yenhliziyo, njengoba konke abakhathazekile ngakho kuzama ukulungisa ukukhishwa kwabo okulandelayo . Yonke iCall of Duty Black Ops yethu: AmaCold War Hacks azophathwa ngokunakekelwa nekhwalithi engqondweni, ngoba leyo ukuphela kwendlela yokuthola okuningi kuma-hacks / amathuluzi akho!
Imenyu yethu engaphakathi kwegeyimu ibe ngesinye sezizathu ezaziwa kakhulu zokuthi kungani abantu befuna izinsizakalo zethu. Ukuba nekhono lokwenza ushintsho endizeni kubalulekile njenge-hacker, ikakhulukazi uma udlala i-Call of Duty Black Ops: Cold War. Imidlalo emisha njalo izonikela ngokuncintisana okunzima, kepha ungasebenzisa i-COD Black Ops yethu: Cold War Intel Hack ukuzivikela! Noma ngabe uzogadla abadlali bomphakathi noma uthathe imidlalo yangasese, ukusebenzisa imenyu yethu yomdlalo kuzokwenza ukuwina umoya.
A2. Cha, awukwazi ukusakaza ngale nkohliso futhi izobonakala kubabukeli.
Q7. Ingabe ukukopela kusebenza kwimodi yeWarzone?
I-A7. Lo mkhiqizo usebenza kuma-Multiplayer nama-Zombies. HHAYI I-WARZONE.
Ufuna ukuzwa amandla we-COD Black Ops yethu: I-Col War Hack ngokwakho? Thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla!
Noma ngabe ukhathele ukuthembela kuma-randoms ukukusiza, noma ufuna nje ukubona ukuthi kunjani “kolunye uhlangothi”, ukusebenzisa i-INTEL Cold War Cheat yakho kuzokusiza ukunqoba ngezindlela ezingaphezu kweyodwa.
Ingabe usukulungele ukwenza ushintsho? Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla!
Ilungele Yengamela nge-COD BO Cold War INTEL Hack yethu?